Digniin xagga caafimaadka ah oo la soo saaray – XOGMAAL.COM
Digniin xagga caafimaadka ah oo la soo saaray
Gargaarka biniaadanimo iyo gurmadka kale ee la doonayo in lagu soo saaro dadka ku hoos jira burburka hoostiisa ,ayaa muddo todobaad ah ka socda Jasiiradda Sulawes,gaar ahaan magaalada Palu oo ah halkii uu ka bilwday dhulgariirkaasi.
By Soomaaliya	 On Oct 6, 2018
Waxaa jirta digniin xagga Caafimaadka ah oo laga soo saaray dalka Indonesia kadib kolkii meydad badan laga soo saaray burburka ay sababeen dhulgariirkii iyo Sunaamidii ku dhuftay.
Sida laga soo xigtay maalinimadii shalay Hey’adda Maareynta Masiibooyinka ee Indonesia,ayaa ka digtay in dalkaasi uu faraha la galo xaalad caafimaad darro,iyadoo ay sii badanayaan meydadka laga halayo burburka qashinka.
Tirada dhimasha ayaa mareysa 1,571,halka 70,000 Guri ay ku burbureen ama wax ku noqdeen dhulgasriirkii iyo Sunaamidii ku dhuftay Jasiiradda Sulawesi,kadib markii 28-kii bishii hore dhulgariir gaaraya 7.5 uu ku dhuftay dalka Indonesia.
Tirada dadka Al-Shabaab ay ku dileen wadanka Mozambique oo sii kordheysa
Hindise Sharciyeedka Nashqadeynta magaalooyinka ayaa looga doodayaa kulanka Golaha Shacabka